Laptọọpụ Medion kacha mma, ọ bụ akara dị mma?
Akara Medion nwere ike ọ gaghị abụ ewu ewu na Spain, mana ha maara nke ọma na mba ndị dị ka Germany. N'ezie, onye nrụpụta German a bụ otu n'ime ndị isi nke ngwaahịa eletrọnịkị na mba Europe, ebe ọ na-enye ezigbo akụrụngwa maka iji ụlọ, yana ọnụ ahịa dị ala.
Ya mere, ọ bụrụ na ị na-achọ laptọọpụ na-ezute ihe a na-atụ anya na otu n'ime kọmputa ndị a, na-enweghị mkpa maka mgbakwunye, mgbe ahụ ụdị ndị a bụ ihe ị na-achọ. Na-enweghị n'iyi ego, na-akwụ ụgwọ maka ihe ziri ezi, na-enweghị ihe ịchọ mma ma ọ bụ frills na-eme ka ngwaahịa ahụ dịkwuo ọnụ.
1 Laptọọpụ Mediion kacha mma
2 Ụdị akwụkwọ ndetu Mediion
2.1 Usoro E-agbanwe agbanwe
2.2 Egwuregwu ERAZER & Usoro X
2.3 Multimedia P-Series
2.4 E & S-usoro ultraportables
3 Medion ọ bụ ezigbo akara laptop?
4 Ebe ị ga-azụta laptọọpụ Medion dị ọnụ ala
5 Kedu mgbe ịzụtara laptọọpụ Medion dị ọnụ ala?
6 Laptop Medion, ọ bara uru? Echiche m
Laptọọpụ Mediion kacha mma
Medion Akoya S15449 Silver ...
PORTABLE MEDION AKOYA...
Medion E4251 Nwa...
Ụdị akwụkwọ ndetu Mediion
N'ime ngwa Medion ị ga-ahụ ọtụtụ usoro ma ọ bụ oke ahaziri iji gboo mkpa dị iche iche. N'ime nke ọ bụla n'ime ha ị nwere ike ịchọta ụdị nwere nhazi dị iche iche, nke mere na ị nwere ike ịhọrọ nke kachasị mma dịka ihe ị na-eme atụmatụ imefu na arụmọrụ ịchọrọ iji nweta. Usoro ndị a bụ:
Usoro E-agbanwe agbanwe
MEDION nwere ike ibugharị...
Ọ bụ nso nso na-enye ukwuu ngagharị na versatility, ebe ọ bụ na ha bụ convertibles nke ika. N'ihi akụrụngwa ndị a ị nwere ike nweta nkasi obi niile nke laptọọpụ na-enye gị, na uru nke mbadamba nkume, na ihuenyo mmetụ na mpịachi iji nwee obi ụtọ n'ebe ọ bụla ịchọrọ. N'ezie, ha bụ ndị kasị mfe na njem ha kacha mma.
Egwuregwu ERAZER & Usoro X
Ọ bụ usoro ezubere maka ndị na-anụ ọkụ n'obi na ndị na-egwu egwuregwu na-achọ ịrụ ọrụ kachasị. Ndị otu a nwere olu dị elu karịa ndị gara aga, ebe ọ bụ na ha anaghị elekwasị anya na njem, ma na arụmọrụ. Ọ bụrụ na ị na-achọ ike maka ọrụ gị ma ọ bụ egwuregwu vidiyo, nke a ga-abụ usoro Mediion ha.
DURAGADGET Ọkà Okwu maka...
Ọ bụ usoro kachasị "isi", ya bụ, nke ezubere maka ọtụtụ ndị ọrụ na-achọ nguzozi dị mma. Laptọọpụ ụwa niile nke ị ga-eji na-anụ ụtọ ụdị sọftụwia niile, site na akpaaka ụlọ ọrụ ruo ọtụtụ mgbasa ozi, gụnyere ụfọdụ egwuregwu vidiyo.
E & S-usoro ultraportables
Usoro nke ọzọ a na-achọ ndị na-achọgharịgharị, ma na-enweghị ịchụ àjà. Ọ bụ usoro nke ultrabooks, nwere akụkụ kacha nta na ịdị arọ, mana nwere ezigbo arụmọrụ. Nke ikpeazụ bụ ihe dị iche na ha site na E-Series nke mmalite, ebe arụmọrụ abụghị ihe bụ isi.
Medion ọ bụ ezigbo akara laptop?
German brand Medion dị nnọọ mma karịa ka ọtụtụ ndị na-eche, ebe ọ bụ na ọ bụ laptọọpụ "dị ọnụ ala", mmadụ nwere ike iche na a na-eleghara àgwà nke ngwá ọrụ ndị a anya. Mana, maka ọtụtụ ndị ọrụ na-achọ iji ụlọ, ha karịrị nke ọma.
Ha nwekwara ike inye gị ohere ịchekwaa n'ịzụta ka ị na-emefu na ihe ọzọ, ma ọ bụ nwee amụma mmelite mbụ site n'ikwe ka ị "okomoko" nke ịgbanwe akụrụngwa ngwa ngwa karịa ka ị ga-eme ma ọ bụrụ na ịzụrụ ngwá ọrụ dị oke ọnụ nke ịchọrọ ịgbatị ndụ ya. iji mebie ya ...
Na mgbakwunye, ụlọ ọrụ a emepụtala kọmpụta maka Aldi na Disney, yabụ, ha agaghị eme nke ọma. Nke mere na na 2011 Lenovo lere anya na ụlọ ọrụ ahụ wee zụta ya, ugbu a bụ akụkụ nke ndị China a. Ma ọ bụrụ na nke ahụ ezughị gị, ahụmịhe afọ 30 nke ụlọ ọrụ ahụ, ihe ọhụrụ ya, ịdịmma ya, ọrụ ya na ọnụahịa kwesịrị ime ka ị kwenye.
Ụfọdụ otu egwuregwu na-atọ ụtọ ịhọrọ dị ka otu nke abụọ, ma ọ bụ maka ezinụlọ ebe ịchọrọ ịzụrụ ọtụtụ otu iji soro klaasị ịntanetị iche na nke ahụ anaghị ebute nnukwu ego ego. Ọbụlagodi maka ụlọ ọrụ ebe ị ga-azụta ọtụtụ kọmpụta maka ụlọ ọrụ ma ọ bụ ndị ọrụ dị iche iche ... Ego a zụtara n'ọnụọgụ buru ibu Medion laptops nwere ike ime nnukwu mgbanwe na ụdị ndị ọzọ dị oke ọnụ.
Ebe ị ga-azụta laptọọpụ Medion dị ọnụ ala
Ọ bụ ezie na ụfọdụ amaghị ika ahụ, Medion na-ewu ewu na Europe, na na mba ndị dị ka Spain ahịa ha na ntụkwasị obi na-amalite ito eto. Ya mere, ị nwere ike ịhụ ha na ụlọ ahịa ndị a na-emekarị, dịka:
Amazon: ikpo okwu ire ere nwere ọtụtụ ụdị nke usoro dị iche iche ịhọrọ. Tụkwasị na nke a, ebe ọ bụ na ọ bụghị onye na-ere ahịa kpọmkwem, ma ọ bụ ikpo okwu ebe a na-enye ngwaahịa sitere na ọtụtụ ụlọ ahịa ndị ọzọ, ị nwekwara ike ịchọta ụdị dị iche iche na ọnụahịa, na-enwe ike ịhọrọ ihe kacha mma. N'ezie, ị nwere uru na nchekwa nke saịtị a na-enye, ma ọ bụrụ na ị bụ onye ahịa Prime, ha ga-ezigara gị ya n'efu na ngwa ngwa.
Ụlọikpe Bekee: ihe dị iche iche nke ire ere na Spanish Geography nwere ụfọdụ Mediion ụdị dị. Na mgbakwunye, ị nwere ike ịhọrọ nhọrọ kachasị mma mgbe niile, na-azụta site na webụ ka iziga ya n'ụlọ gị. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụ ebe dị mma ịzụta laptọọpụ Medion ndị a, n'agbanyeghị na ị gaghị achọta ọnụahịa kacha mma na ahịa. Otú ọ dị, ị na-enwe ohere mgbe niile iji ohere ụfọdụ ọkụ na-enye ndị ụlọ ahịa a malitere, ma ọ bụ chere Tencoprices ma ọ bụ ihe yiri ya.
Ndị ọrụ PC: nnukwu ihe mgbagha nke Murcia nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke usoro na ụdị nke ụlọ ọrụ a, na-enwe ike ịchọta laptọọpụ Medion kacha mma maka gị. Na mgbakwunye, ha na-enyekarị ọnụ ahịa asọmpi, na nnyefe na-emekarị ngwa ngwa. Ha nwekwara ezigbo ọrụ ndị ahịa, n'ihi na a ga-ekpuchi gị n'ụzọ ọ bụla.
mediamarkt: "Ọ bụrụ na ị bụghị onye nzuzu", ebe ọzọ ị nwere ike ịzụta laptọọpụ Medion na ọnụ ahịa dị mma bụ agbụ German ọzọ, na-enwe ike ịhọrọ n'etiti usoro ịzụrụ ihe n'ịntanetị ka ị ghara ịpụ, ma ọ bụ gaa n'onwe gị. gaa n'otu n'ime ụlọ ọrụ ya iji nweta ya, ma ọ bụrụ na-amasị gị.
nrutu: agbụ Gala nwekwara ụfọdụ ụdị Mediion, yana ọnụ ahịa na-adịghị njọ. N'ezie, ọ bụ ebe ị nwere ike ịhọrọ ma usoro ịzụ ahịa n'ịntanetị na ịzụrụ na ụlọ ahịa anụ ahụ.
Kedu mgbe ịzụtara laptọọpụ Medion dị ọnụ ala?
Ọnụ ala dị ala nke akwụkwọ ndetu Medion ndị a na-eme ka oge ọ bụla bụrụ ohere dị mma ịzụta otu n'ime ngwaahịa ha. N'ịbụ ndị dị ọnụ ala, ị gaghị achụ nnukwu àjà akụ na ụba, n'agbanyeghị na ị nwere ike nweta ha ọbụna ọnụ ala na:
Black Friday: A na-eme mmemme a kwa afọ na Fraịde ikpeazụ nke Nọvemba. Na Black Friday, ụlọ ahịa niile dị n'ụwa na-etinyekarị ngwaahịa ha na nnukwu onyinye. Ọnụ ego ị nwere ike ịchekwa dị oke ọnụ, n'agbanyeghị na ị ga-amarịrị ịnweta nkwalite kachasị mma tupu erere ha.
Ụbọchị Mbụ: Naanị maka ndị ahịa Prime, ihe omume Amazon ọzọ a na-enye gị ohere ịnweta ngwaahịa ụfọdụ dị ọnụ ala karịa ọnụahịa ha na-emebu. Na mgbakwunye, ndị ahịa niile na-akwụ ụgwọ maka ọrụ ndenye aha adịchaghị ga-enwekwa mbupu n'efu na ike dị ukwuu n'ihe gbasara ngwa ngwa, ka ọ bịarute ozugbo enwere ike.
Cyber ​​Monday: Monday mgbe Black Friday na-abịa ezumike ọzọ ebe a na-enye ụlọ ahịa ihe otiti n'ịntanetị. Netwọk ahụ juputara na mbelata dị ukwuu maka ndị kacha dị n'azụ bụ ndị na-enweghị ike ịchọta ngwaahịa ha n'oge Black Friday.
Ụbọchị na-enweghị VAT: Ụbọchị a, a na-etinye mbelata 21% maka ọtụtụ ngwaahịa teknụzụ na ụlọ ahịa dị ka Mediamarkt. Ọnụ ego mbelata nke ukwuu nke na-adọta ọtụtụ ndị na-azụ ahịa kwa afọ. Iji jiri ya mee ihe, ị ga-akpachara anya n'oge a na-enye ire ọkụ ndị a.
Laptop Medion, ọ bara uru? Echiche m
A bịa na laptọọpụ Medion, 58% nke ndị ọrụ na-enwe obi ụtọ na ịzụrụ ihe, ebe ndị ọrụ ndị ọzọ enweghị obi ụtọ. Nke a nwere ike ịbụ eziokwu mgbe ị tụlere na mgbe ịzụrụ laptọọpụ Medion, ị na-azụta ihe dị mfe, yabụ ị nweghị ike ịtụ anya ihe ị ga-enweta na ngwaọrụ adịchaghị.
Mana ọ bụrụ na ị maara nke a, ị ga-eso na ndị ọrụ afọ ojuju, ebe ọ bụ na ha na-enye ihe ha kwere nkwa. N'ezie, ụlọ ọrụ German dị na Frankfurt anọwo na-aghọrọ mkpụrụ dị mma kemgbe 1989, na-aga n'ihu iji gbanwee ahịa laptọọpụ na Germany na ọnụ ahịa ya, na-enweghị ịchụ àjà dị mma.
Nke ahụ kwuru, ọ bụrụ na ị na-achọ ihe kachasị mma nke kachasị mma, yana teknụzụ kachasị elu, àgwà mmecha zuru oke, na akụrụngwa jupụtara, mgbe ahụ, Medion abụghị ihe ị na-achọ. N'ụzọ megidere nke ahụ, ọ bụrụ na ịchọrọ naanị otu ndị na-arụ ọrụ nke ọma, nke na-adịgide adịgide, nke na-adịghịkwa ọnụ, gaa maka otu n'ime otu ndị a ...
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Ụdị » Laptọọpụ Mediion